घरमा धेरै धेरै घण्टा काम गर्दै? रोक्नको लागि सजिलो तरीका ... | Martech Zone
सोमवार, जुलाई 16, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज रात मैले कामको लागि मेरो ल्यापटपको लागि मेरो विद्युत आपूर्ति छोडिदियो। मसँग दुईवटा पावर सप्लाईहरू थिए (अर्को राम्रो काम गर्नका लागि ... सँधै अतिरिक्त किन्नुहोस्!) तर ती मध्ये एउटा भर्खर फ्रिजमा गयो।
जब म यो पोष्ट लेख्छु, मसँग २ काम गर्न १ घण्टा १2मिनेट बाँकी छ। अवश्य पनि, मसँग घरमा अरू कम्प्युटरहरू छन् - तर तपाईको आफ्नै ल्यापटप जस्तो तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको तरीकाले कन्फिगर गरेको जस्तो राम्रो काम गर्दैन। आज रात म दौड गर्दैछु:
केहि कोड समीक्षा गर्नुहोस् जुन फर्मले मलाई पठाएको हो मेरो मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्नका लागि कि यो स्प्यागेटी कोड हो वा बचाउन लायक हो।
PHP प्रतिस्पर्धाको न्याय पूर्ण गर्नुहोस् जुन त्यो थियो हिजो हुने.
केही पृष्ठ लेआउटहरू समीक्षा गर्नुहोस् जुन हामी कार्य गर्दैछौं त्यसको लागि स्टीफनले पूरा गरेका थिए।
मेरो केहि बढाउन जारी राख्नुहोस् वर्डप्रेस प्लगइनहरू.
केहि गर्न जारी राख्नुहोस् ब्लग-टिपिंग.
र त्यहाँ तपाईंसँग यो छ ... अब यो पोस्ट लेखिसके पछि मसँग २ घण्टा फ्ल्याट बाँकी छ! त्यसोभए टिप यो छ: तपाईंको विद्युत आपूर्ति काममा छोड्नुहोस्! यो निश्चित रूप मा तपाइँको घर मा काम को लागी तपाइँको घण्टा सीमित गर्दछ।